Himalaya Dainik » सुशान्तको बुबाले उनको प्रेमिका रियामाथि लगाएका १० आरोप
सुशान्तको बुबाले उनको प्रेमिका रियामाथि लगाएका १० आरोप
पोखरा । अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत गत जुन जुन मुम्बईको बान्द्रामा उनको घरमा मृ-त अवस्थामा फेला परेका थिए। पुलिसले अनुसन्धानले उनले देह त्याग गरेको जनायो । उनका बुबा केके सिंहले छोरा सुशांत सिंह राजपूतकी र उनको परिवार बिरूद्ध एफआईआर दर्ता गरेका छन्।
केके सिंहले आफ्नो एफआईआरमा रिया चक्रवर्तीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ। भारतीय मिडियाका अनुसार उनले लगाएका आ-रोप यस्ता छन् ।
– सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले भनेका छन् सन् २०१९ अघि मेरो छोरा सुशांतलाई कुनै पनि प्रकारको मान सिक समस्या थिएन, रिया चक्रवर्तीको सम्पर्कमा आउँदा अचानक के भयो, सुशांत सिंहलाई मा नसिक विचलित बनाउन उनले त्यस्तो के गरिन् ?
– यदि सुशांत सिंह राजपूतको मस्तिष्कको उपचार भैरहेको थियो भने किन उनको परिवारबाट कुनै लिखित वा मौखिक अनुमति लिइएको छैन। किनभने जब कोही मान-सिक रूपले बिरामी छ, उसको सबै अधिकार उसको परिवारसँग छ, यसको अनुसन्धान गरिनु पर्छ।
– मेरो छोरा सुशांत सिंहको संरक्षकको रुपमा रिया चक्रवर्तीलाई किन ब्यवहार गरियो ? मलाई लाग्छ यी डाक्टरहरू पनि रियाको सबै षडयन्त्रमा संलग्न थिए। यसको अनुसन्धान गरिनु पर्छ किन उनीहरुले परिवारको अनुमति विना उपचार गरे । मेरो छोरालाई कुन औषधि दिइयो यस बारे थाहा हुनुपर्दछ।
– जब रियाले थाहा पाइन् कि सुशांत सिंह राजपूतको मान-सिक अवस्था खराब छ, यस अवस्थामा उनीले एक्लै उपचारको जिम्मा लिने मेरो छोराको उपचाको सबै किन लगिन् ? उनले त्यहि समयमा, मेरो छोरालाई त्यो नाजुक अवस्थामा छोडेर हिडिन् र ऊसँगको सबै सम्पर्क अन्त्य समेत गरिन् , त्यसैले मेरो छोरोले देह त्याग गर्‍यो।
सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले भने कि मेरो छोरा फिल्मको रेखा छोडेर केरलामा जैविक खेती गर्न चाहन्थ्यो, उसको साथी महेश उनीसँग जान तयार थिए, तब रियाले विरोध गरिन् र उसलाई कतै जान दिइनन् । यदि उनले भनेको नमानेर मेरो छोरा गएभने आफुसंग भएका सबै मेडिकल रिपोर्ट समेत मिडियालाई दिने ध म्की दिइन् ।
रिया चक्रवर्तीको बैंक ब्यालेन्स पनि कम हुँदै गइरहेको थियो, त्यसैले रियालाई लाग्यो कि सुशान्त अब उनको लागि कुनै काम लाग्दैन । यस पछि जून ८ सम्म रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूतसँगै बसिन् र सबै नगद, गहना, ल्यापटप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड र उसको पिन नम्बर, सबै आवश्यक कागजात र सुशान्तको उपचार कागजात लिएर घर गइन्।
रिया चक्रवर्तीले उनको फोनमा सुशांत सिंह राजपूतको फोन नम्बर ब्लक गरेकी थिइन् । यस पछि सुशांतले आफ्नी बहिनीलाई बोलाए र उनले भने रियाले मलाई कतै अप्ठेरोमा पार्नेछ । उनी यहाँबाट मलाई छोडेर गएकी छन् । मलाई ध म्की पनि दिएकी छन् यदि तिमीले मेरो कुरा सुनेनौ भने तिम्रा सबै कागजातहरू मिडिया सामु सार्वजनिक गरिदिन्छु । तिमीलाई पा-गल सावित गरिदिन्छु ।
सुशांत सिंह राजपूतका बुबाले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् जून ८ मा, सुशांतले सँग गोप्य रूपमा राखेको दिशा नामकी सेक्रेटरीले देह त्याग गरेपछि मिडियामा धेरै समाचारहरू फैलिन थाल्यो । यो विषयले पनि छोरालाई नकारात्मक असर पर्यो । त्यती बेला सहाराको लागि मेरो छोराले रियालाई सम्पर्क गर्न कडा परिश्रम गर्यो तर रियाले मेरो छोराको नम्बर ब्लक गरेकी थिइन् । मेरो छोरा भित्र गहिरो चिन्ता थियो कि रियाले उनलाई कुनै आ-रोप नलगाउन् । सुशान्तलाई दिशाको निध-नमा पनि आफुलाई रियाले जिम्मेवार बनाउँछ की भन्ने शं-का थियो ।
मेरो छोराको कोटक महिन्द्राको बैंक खातामा करिब करोड रुपैयाँ थियो, पछिल्लो बर्षमा केहि करोड निकालिएको थियो । तर त्यो पैसा निकाल्न मेरो छोरासंग कुनै अनुमति लिइएन । मेरो छोराको सबै खाता जाँच गरिनु पर्छ। यी बैंकबाट कति पैसा आएको थियो क्रेडिट कार्ड रिया चक्रवर्तीले आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग ठगी र षड-यन्त्र गरेर प्रयोग गरे ।
यस घटना हुनु अघि सुशांत सिंह राजपूत अभिनयको संसारमा एक ठूलो नाम थियो, त्यसोभए के कारण छ कि रियाको आगमन पछि, सुशांत सिंहको फिल्म कम हुँदै गयो । यो कुराको पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
ताजा खबरको सहयोगमा तयार
पतिले खाेल्तीबाट ‘चक्कु’ निकालेर मेराे नाक काटिदिए…
जहाँ महिलाले चप्पल लगाएर हिड्दा आवाज निस्किए हुन्छ कारवाही !
चर्चामा नायिका श्वेता खड्काको नयाँ लुक्स (फाेटाेफिचर)
यी १४ बलिउड नायिका जसकाे सुन्दर आँखाले बनाउन सक्छन् कायल (तस्विरसहित)
आँपको खिर यसरी बनाउनुस्
यी ४ नायिका बलिउडमा बोल्ड हुँदा पनि चल्न सकेनन्, अहिले यस्तो काम गर्छन्
कोरोना महामरीकोबिचमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया फेरी अर्को विपत
साउन २० गते मंगलवारको राशिफलः यी राशिका लागि अशुभ
पैसा कमाउन आमाकै मिलेमतोमा शिशुलाई सडकमा राखेको खुलासा (भिडियो)
महिलालाई ए-सिड हान्दा सारा देश बोल्छ, तर मलाई हान्दा कोही बोलेनन् [भिडियो]
उपत्यकामा फेरि जोर विजोर लागू गर्न प्रस्ताव
पशुपति आर्यघाटमा जलाउन तयार श-व बरामद